MacBook Pro ho an'ny WWDC, macOS ofisialy Big Sur 11.4, ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac | Avy amin'ny mac aho
Miditra amin'ny andro farany amin'ny volana Mey isika ary araka ny efa fantatrareo rehetra 7 Jona ho avy izao dia manomboka i Apple miaraka amin'ny kaonferansa ho an'ny mpamorona iray amin'ireo WWDC andrasana indrindra tato ho ato. Amin'ity fihaonambe ity dia voalaza fa hanana fitaovana izay hafahafa matetika amin'ity hetsika ity isika, saingy toa amin'ity indray mitoraka ity raha toa ka afaka manolotra fitaovana, headset na mitovy amin'izany izy ireo, dia ho hitantsika ... Ary ankehitriny andao apetraka izay hitranga amin'ny volana ambony ary hifantoka amin'ny zava-nitranga isika tamin'ny herinandro lasa teo, herinandro feno vaovao lehibe, fanavaozana ary maro hafa.
Izahay dia ity fanangonana vaovao amin'ny herinandro ao amin'ny Soy de Mac ity miaraka amina tsaho milaza fa hiala amin'ny fiandohan'ny lahatsoratra izahay, ny fahatongavan'i MacBook Pros miaraka amin'ny processeur M1X ho an'ny kaonferansa ho an'ny mpamorona eran-tany izay nomanin'i Apple ho an'ny 7 Jona.
La efa navoaka ny kinova vaovao an'ny macOS Bic Sur 11.4 Ary manitsy lesoka lehibe sasany amin'ity kinova ity ka ilaina ny manavao ny Mac anao faran'izay haingana. Ity kinova vaovao ity dia manampy zava-baovao kanto vitsivitsy, fa iray manandanja manitsy ny fahalemena hita.
Momba ny ny fahalemena dia hita tao amin'ny kinova macOS Big Sur teo aloha no vaovao iray hafa nasongadina tamin'ity herinandro ity. Ity lesoka fiarovana ity dia efa nalamina tamin'ny kinova vaovao ka te-hikiry hatrany izahay ny maha-zava-dehibe ny fametrahana ny fanavaozana navoakan'i Apple.
Ny Beats Studio Buds vaovao dia mety ho ofisialy tsy ho ela. Ary izany ve LeBron James taloha, nipoitra tamin'ny sary vitsivitsy niaraka tamin'ny headphones an'ity orinasa ity izay tadidinay fa eo ambanin'ny elo Apple, mampiseho hoe manao ahoana ity maodely vaovao Wireless beats ity.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Avy amin'ny mac aho » Apple » About us » MacBook Pro ho an'ny WWDC, macOS ofisialy Big Sur 11.4, ary maro hafa. Ny tsara indrindra amin'ny herinandro dia avy amin'ny Mac aho